ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်လိုသော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်လိုသော
Posted by လူကလေး on Feb 13, 2013 in Creative Writing, Short Story | 16 comments
လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာ ဘာကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်လေ့ရှိပါသလဲ..
ဘယ်အတိုင်းအတာထိရော .. ယုံကြည်ကြပါသလဲ.. သူတစ်ပါးရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှု ပျက်ဆီးသွားတဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားရမှာလဲ.. ဘယ်အချိန်မှာ ယုံကြည်မှု ပြန်ရမှာ လဲ.. အရင်လိုရော ယုံကြည်ပါဦးတော့မလား. ကျွန်တော် ကြားဖူးတယ် .. ပျက်ဆီးဆုံရှူံးသွားတဲ့ ယုံကြည်မှု ဟာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်တဲ့.. ဒီစကားလေးသာ တကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ . . နွေးနွေး ဆီက နေ ယုံကြည်မှု ပြန်ရဖို့ နွေးနွေး ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြီး ယုံကြည်လာဖို့ တော်တော် ခဲယဉ်းနေပြီပေါ့ ဗျာ ..
ဟုတ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့မိတယ်. ..
“ကိုလင်းကို ပြောပြမယ် .. မိန်းကလေးဆိုတာ ဆူးပေါ်ဖက်ကျလဲ. .ဖက်ပဲပေါက်တယ်.. ဖက်ပေါ်ဆူးကျလဲ ဖက်ပဲပေါက်တယ်.. တဲ့.. အဲဒီတော့ အရာရာကို ဆင်ခြင်နိုင်မှ တော်ကာ ကျတာ . . ကိုလင်း ကို အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုလင်း နွေးနွေးကို ချစ်တာ သိပါတယ်.. နွေးနွေး က အဲဒါတွေ မကြိုက်ဘူးပြောတာပါ.. ”
ကျွန်တော်နဲ့နွေး နှစ်ယောက်တွေ့တိုင်း နွေးပြောနေကျစကားလေးတွေပါ..
“အော်. နွေးရယ် .. ကိုလင်းက နွေးကို ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး.. ချစ်ပဲချစ်မှာနော်.. နွေးမကြိုက်ဘူးဆိုတာ နွေးလက်မခံနိုင်တာ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူးကွာ .. နော်. ”
အဲလိုပါပဲ.. ကျွန်တော့ နွေးက .. .. .. ကျွန်တော့်ထက် အသက်၎နှစ်လောက် ငယ်ပေမယ့် သူသိတာ အများကြီးပါပဲ. .သူသိတယ်ဆိုတာက လုပ်သင့်တာ . မလုပ်သင့်တာ.. ဘာကြောင့်လုပ်သင့်တယ်.. မလုပ်သင့်ဘူး.. သူ့အမြင် .. အားလုံးကို ကျိုးကြောင်းဆက်စပ် ပြီး ပြောတတ်တယ်. . ဆရာမကြီး အထာ လည်း သူဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘုး.. ရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာဆို တကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့.. အားတတ်သရော တဖက်သား နားလည်လက်ခံအောင် ပြောတတ်တယ်.. ဒါက သူ့အရည်အချင်းပါပဲ.. နွေးကို ချစ်ခဲ့မိတာ အဲဒါတွေကြောင့်လဲပါတယ်..
“နွေး .. ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာ နွေး အယုံကြည်ရဆုံးသူက ဘယ်သူလဲဟင် .. နွေး..”
ကျွန်တော် နွေးကို မေးမိတာပါ. . ကျွန်တော် ကိုလင်း ပါပဲဆိုတဲ့အဖြေကို ကျွန်တော်သိနေတယ်ပေါ့ဗျာ .. ဒါပေမယ့် နွေးက ..
“အင်း… နွေး . .အယုံကြည်ရဆုံးယောက်ျားလေးက .. သူက .. .. အင်း .. နွေးရဲ့ ဖေဖေ ပေါ့..ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုလင်းရဲ့.. ”
“ဟင် .. ဒါဆို နွေးက ကိုယ့် ကို မယုံဘူးပေါ့လေ.. ”ကျွန်တော့ မကျေမနပ်နဲ့မေးလိုက်မိပါရဲ့..
“အော် .. ကိုလင်း ရယ် .. ကိုလင်းကို လည်း ယုံသင့်သလောက် ယုံပါတယ်.. ဒီလိုအချိန်မှာ အကြွင်းမဲ့ ယုံတာမျိုး.. ဖေဖေ့ကို ယုံကြည်သလို ကိုလင်း ကိုယုံတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်.. ဟေ့ ဟေ့. . စိတ်မဆိုးရဘူးနော်.. ဟွန်း.. ” နှုတ်ခမ်းဆူလေးနဲ့ပြောတဲ့ နွေး ကို ကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ပါဘူး..
“အင်းပါ.. နွေးရယ် .. စိတ်မဆိုးပါဘူး.. နွေးယုံသလောက်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် နွေးဖေဖေ ကို နွေး ယုံသလိုမျိုး.. ကိုယ့်ကို ယုံကြည်လာအောင် ကိုယ်ကြိုးစားမယ်နော် . . . အဲဒီလိုအချိန်ရောက်လာခဲ့ရင် နွေး ရဲ့ အယုံကြည်ဆုံးယောက်ျားလေး က နွေးဖေဖေရယ် ကိုလင်းရယ် လို့ ပြောရမယ် ..နော် . . ”
“ဟုတ်ပါပြီ ရှင် .. ဟုတ်ပါပြီ .. ရပြီလား.. ”
နွေးရဲ့ အဖြေကို ကျွန်တော် ကျေနပ်ပါတယ်..။ အင်းပေါ့လေ.. သူ့အဖေလောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်ယုံကြည်ပါ့မလဲ.. လို့..
ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် ယုံတယ်. .ကျွန်တော် နွေးက လွဲပြီး ဘယ်မိန်းကလေးကို မှ . . ကျွန်တော် မချစ်ဘူး. . ချစ်လို့လဲရမှာ မဟုတ်ဘူး.. ကျွန်တော်နွေးကို ပဲ ချစ်တယ်..
နွေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ မိန်းကလေး.. အရမ်း ကြိုးစားတယ်.. လေ့လာတယ်.. sharing လုပ်တယ်.. သူသိတာတစ်ခုကို သူများကို လည်း သိစေချင်တယ်. .စိတ်ရင်းတကယ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်..
နွေးက အန္တရာယ် တွေကို ကြိုမြင်တတ်တယ်.. အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာမျိုးတွေ့ရင် .. ဘာလဲ.. ဘာလုပ်တာလဲ. .ဆိုပြီး .. ဘု ကျကျ ပြန်ကောတတ်တဲ့ ကောင်မလေး..
နွေးရဲ့အိတ်ထဲမှာ ဓားတစ်ချောင်းအမြဲထည့်ထားတယ်. . ဓားဆိုပေမယ့် ..ထိုးတဲ့ဓားမဟုတ်ပါဘူး. . လှီးဖြတ်တဲ့ဓားပါ.. တွန်းထုတ်ရတယ် .. မလိုရင် ပြန်ဆွဲချလိုက်ရုံပဲ..
ဒီဓားနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးတိုင်း .. “ဟဲဟဲ.. လူရှိန်အောင်ပေါ့.. ” ဆိုပြီး အမြဲပြောတယ် ..
ကျွန်တော် နွေးကို စိတ်ချတယ် .. ကျွန်တော် နွေးကို လိုက် မပို့ပေးနိုင်တဲ့အခါတိုင်းလည်း နွေးက “ရပါတယ်.. ဒီမှာ ဓားပါတယ်.. တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့.. ဇွက် ကနဲပဲ.. ဟဲဟဲ.. ” ဆိုပြီး ဒီကလေးမ နောက်တီးနောက်တောက် ဆိုတတ်ပါသေးတယ်.. တကယ်ပါ နွေးက ကျွန်တော်အထင်ကြီးရတဲ့ မိန်းကလေး ပါပဲ..
ဟုတ်တယ် .. ဒါတွေအားလုံးက ကျွန်တော် မှားခဲ့တာ .. မသာယာသင့်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့စွာ ကျွန်တော်သာယာ မိတဲ့အတွက် .. ကျွန်တော့်ရဲ့ တဒင်္ဂ စိတ်ခံစားချက် လေးကို ကျွန်တော့် ရဲ့တစ်ဘဝနဲ့ . .. လဲလိုက်မိသလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်.. နွေးက မသောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ ဒီအရည်တွေကို ကျွန်တော် သောက် ခဲ့မိလို့ .. ကျွန်တော့်ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး မဲမှောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှန်းမသိဘဲ .. ကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့မိတယ်..
နိုင်ငံခြားနေပြန်လာတဲ့ အကို့ရဲ့ ပြုစုမှုနဲ့ .. ကျွန်တော်တို့ ညီအကို တွေ နဲ့ အကို့သူငယ် ချင်း တွေ ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်.. အဲဒီ club ဆိုတဲ့နေရာကိုပေါ့. .. မလိုက်ဘူ့းငြင်းနေပေမယ့် လည်း .. အားနာတာက တစ်ကြောင်း.. ကျွန်တော် လည်း သွားကြည့်ချင် ဖူးတာကတစ်ကြောင်းကျွန်တော် လိုက်သွားခဲ့မိတော့တာပါပဲ. ..
နဂိုကတည်း က မူးနေတဲ့ ကျွန်တော် .. . အဲဒီ အထဲရောက်တော့ ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး .. ကျွန်တော် ကလည်း ကခဲ့တယ်.. စကားလည်းပြောခဲ့တယ် . . အဲဒီ က အမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့ .. ကျွန်တော် ပျော်နေခဲ့တယ် ထင်တယ်.. ကျွန်တော် သာယာမိတယ်ပေါ့ဗျာ . . .. ဒါပေမယ့် ခဏလေးပါပဲ.. ကျွန်တော် ဘာမှ မသိတော့ဘူး..
ခေါင်းကိုက်လွန်းလို့ ကျွန်တော်ဆက်အိပ်လို့မရတော့ဘူး .. မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ အလင်းရောင် က စူးကနဲ.. တစ်ဖက်ကို လှည့်ကြည်လိုက်တော့ .. အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကို ကျွန်တော်တွေ့တယ်…. သူ ကျွန်တော့ကို ပြုံးပြနေပေမယ့် .. ကျွန်တော် ကတော့ လန့်သွားခဲ့မိတာအမှန်ပါပဲ.. ကျွန်တော့် အခန်းထဲ သူဘယ်လိုရောက်လာလဲမသိ..
.. သွားပြီ .. ဆိုတဲ့ ယူကျုံးမရ ဖြစ် တဲ့ အသိက ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲကို ရောက်လာခဲ့တယ်.. ခေါင်းကိုက်တာထက် ပိုဆိုးသွားပြီ . .
ဒီအမျိုးသမီးလေးကိစ္စ ကို ကျွန်တော်နဲ့ အကိုတို့နဲ့ဖြေရှင်းလို့ပြီးသွားခဲ့ပါတယ် .. အဓိက ကတော့ နွေးနွေးမသိအောင်ပေါ့ဗျာ.. နွေးနွေးကလည်း ကျွန်တော့်အပေါ်ကို အေးဆေးပါပဲ .. ဒါပေမယ့် . အဲနောက်ပိုင်းမှာ တော့ . . နွေးနွေး နဲ့တွေ့တိုင်း.. နွေးနွေး မေး နေကျ မေးခွန်းတစ်ခု ပိုလာခဲ့တာပါပဲ.. “ကိုလင်း . .နွေး အပေါ်မှာ ဝန်ခံစရာလေးများ မရှိဘူးလား.. ” ဆိုပြီး နွေး က မေးမေးလာတော့တာပါပဲ. .. ကျွန်တော်က လည်း ပိပိရိရိကို . . “နိုးပါ .. နွေးရယ် .. ကိုယ် မဟုတ်တာ ဘာမှ မလုပ်ထားဘူး. .နော်. .. ” . . ဒါက တော့ ကျွန်တော့် အဖြေပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော်က နွေးယုံတယ်ထင်နေတာဗျ. ..
ကျွန်တော်နဲ့ နွေးက တစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းကို တစ်ယောက် ကလိနေကျပေါ့ဗျာ… နွေးက သူ့ဖုန်း ကျွန်တော့်ကို ပေးမကလိတာ ကြာနေပြီဗျ.. သူလည်း ကျွန်တော့်ဖုန်းကို ကိုင်တောင်မကြည့်တော့ဘူး… တကယ်ပါ ကျွန်တော် သာမန်ပဲထင်နေတာဗျ.. ..
နွေးကိုနောက်ချင်စိတ်နဲ့ နွေးရဲ့ဖုန်းကို ကျွန်တော် ဖွက်ပြီးအိမ်ကို ယူခဲ့မိပါတယ်.. ထူးဆန်းတယ်ဗျ.. နွေးက ဖုန်းပျောက်နေကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောတောင် မပြောဘူး..
ကျွန်တော် ကိုယ့်မျက်လုံးကို ကိုယ်မယုံကြည်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်မှ ကျွန်တော်အစစ် .. အဲဒီနေ့က ပုံစံအတိုင်းပဲ.. ဘေးမှာ ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့.. ဟာ.. နွေးက ဒီ ပုံကို ဘယ်ကနေရခဲ့တာလဲ.. ဟာ .. သွားပြီ .. ဒါဆိုနွေး သိနေတာပေါ့.
ဒါဆို နွေးက ဝန်ခံစရာ ရှိလား.. ဝန်ခံပါဆိုတာ.. ဒါကိုပြောတာပေါ့.. ဒါတွေကို သိသိရဲ့နဲ့ ကျွန်တော့်ကို .. သူကျွန်တော့်ကို .. ဘာမှ မသိသလို .. .
ဟာ.. … . .. . .. . .. . . . .. . . ..
ကျွန်တော်နွေးကို တွေ့ရမှာ ကြောက်နေပေမယ့်လည်း .. ကျွန်တော်နွေးရဲ့ဖုန်းကို ပြန်ပေးရင်း . နွေးနဲ့ ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်..ထိတ်လန့်စွာနဲ့ပဲ .. ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်.. . . ..
နွေးကပြောတယ်.. ကျွန်တော် ဖုန်းယူသွားတာကို သူသိတယ်တဲ့…
ဒါပါပဲ.. သူက ဘာမှ မပြောတော့ဘူး.. .. ကျွန်တော်ကသာ.. စကားတွေ .. တောင်းပန်တာတွေ .. ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတာတွေ .. နောက်ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာတွေ.. . နွေး နားငြီး သွား မလားတောင် မသိတော့ပါဘူး..
နွေးက ဘာမှ ပြန်မပြောလေ.. ကျွန်တော် နေလို့ပိုဆိုးလေပါပဲ.. ကျွန်တော် နွေးကို အရမ်းရှက်မိနေပါပြီ.. နွေးကျွန်တော့်ကို မယုံကြည်တော့ မှာ ဆိုးတယ်..
ဟုတ်တယ်.. သူကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး.. .. နွေးဖေဖေ လို နွေးရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရချင်တဲ့ ကျွန်တော်.. အဲဒီ ကျွန်တော်ဆိုတာ .. မဖြစ်လာတော့ဘူးထင်ပါတယ်..
ဘာစကားမှ မပြောခဲ့တဲ့ နွေးက .. ကျွန်တော့်ကို အပြစ်ပေးခဲ့တယ်.. သူ့လက်နဲ့.. သူ့အိတ်ထဲက ဓားလေးနဲ့.. ကျွန်တော့်ရဲ့ .. ရင်ဘက်ကို.. .. .
ကျွန်တော်ထင်မိတယ် .. နွေးပြောနေကျ ဓားနဲ့ ထိုးရင်မြည်တဲ့အသံ… “ဇွက်.. ” လို့လည်း မမြည်ဘူးဗျ…. .
ဘယ်မြည်မလဲ .. နွေးက ကျွန်တော့်ကို တကယ် ထိုးတာမှ မဟုတ်တာ.. ဓား ကကျွန်တော့်ရင်ဘက်ထဲကို ဝင်သွားတာမှ မဟုတ်တာ.. ဒါပေမယ့် သွေးတွေ ထွက်နေတယ်.. ဟုတ်တယ်.. သွေးတွေ..
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲကို ဝင်မယ့်.. သူကိုယ်တိုင် ကိုင်ထားတဲ့ ဓားရဲ့ အသွားကို နွေးက သူ့လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင် ထားလို့ပါ.. အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘက်ထဲကို ထိုးစိုက်လိုက်တာ ဓားကိုဆုပ်ကိုင် ထားတဲ့ နွေးရဲ့ လက်ကလေး သက်သက်မို့.. ကျွန်တော် ဘာဒဏ်ရာမှ မရခဲ့ဘူး.. နွေး ကသာ .. လက်ဖဝါးတစ်ခုလုံးမှာ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. . ကျွန်တော် ယုံကြည်မှုတစ်ခု ကို ဆုံးရှူံးခဲ့တယ်.. ကျွန်တော် တန်ဖိုးထား အထင်ကြီး ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ .. ယုံကြည်မှု ..
အဲဒီအချိန်က စပြီး .. “နွေးကိုယ့်ကို ယုံလား ” ဆိုတဲ့မေးခွန်း.. ကျွန်တော်နွေးကို မမေးတော့တာ .. ခုထိတိုင်ပါပဲ.. အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ နွေး ကျွန်တော့် ကို ယုံကြည်မယ် ထင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် .. ဟိုအရင် နွေးပြောဖူးတဲ့ ကိုလင်းကို ဖေဖေ့လောက်မဟုတ်ပေမယ့်. . နွေး ယုံပါတယ်.. ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ နွေးက မပြောတော့ဘူး.. အရင်ကလို ယုံကြည်မှုမျိုးတော့ နွေး မပေးနိုင်တော့ဘူး ထင်တယ်ဗျာ .
ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ဖြစ်မလာစရာ အကြောင်းမရှိတဲ့ အမှားကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ ကျူးလွန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် တာဝန်ယူရဲတယ်.. ကျွန်တော် ကိုယ် ကျွန်တော် .. လည်း ယုံတယ်.. နွေးကိုလည်း ယုံစေချင်တယ်..
အဲဒါ နွေးအတွက် .. ပြီးတော့ .. နွေးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့.. သားလေးအတွက်.. ကျွန်တော့် ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိသော ဘဝလေး အတွက် .. ကျွန်တော်ဦးဆောင်ရမယ့် အနာဂတ်အတွက် ..
“ဖေဖေ.. ဖေဖေ.. မေမေကထမင်းစားမယ်တဲ့.. ” ကျွန်တော်စာရေးနေတုန်း .. ကျွန်တော့်ပုဆိုးစလေးကို လှုပ်ရမ်းပြီး ထမင်းစားဖို့လာခေါ်နေတဲ့ သားလေး.. လူမော်..
“အေး.. လာပါပြီ လူမော်ရ.. ” လူမော့်ကိုပြောရင်း .. နဲ့ ..
“နွေးရေ.. ဒါလေးလက်စသက်ပြီး လာခဲ့မယ် နော်.. ” နွေးကို ကျွန်တော် လှမ်းအော်လိုက်ပါတော့တယ်. ..
( အဲဒါ နွေးအတွက် .. ပြီးတော့ .. နွေးနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့.. သားလေးအတွက်.. ကျွန်တော့် ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိသော ဘဝလေး အတွက် .. ကျွန်တော်ဦးဆောင်ရမယ့် အနာဂတ်အတွက် ..)
အဲဒီဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်လာကိုဘဲ နွေး လည်းကျေနပ်နေလိမ့်မယ်လို့ တွေးထင်မိတယ်ဗျာ။
ပထမဆုံး မန့် ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ခခ ရေ . . .
နွေး ကချစ်စရာလေးကွယ်။ အပြင်မှာ သာ တွေ့ဖူးခဲ့ရင် အဲ့လိုမိန်းမမျိုး ကို ယူမယ်။
ကျုပ် မောင်ငယ်လေးနဲ့ ပေးစားမို့ပါ။
ဟင် . . . ဂယ်ကြီးလား ?
ဂယ်ဆိုရင်ပြောပြမယ် . . . နွေးဆိုတာက လေ . . . နွေးဆိုတာကလေ . . . စိတ်ကူးထဲကချစ်သူလေး ဟီး ဟီး ဟားဟား
ဟိုလူဂျီး ဂန့်တွားပီ ထင်လိုက်ဒါ …
ဟုတ်မှ ဟုတ်ဘဲနဲ့နော့ …
အောင်မာ … သူက မဂန့်တဲ့အပြင် …
နွေးလေးနဲ့တောင် အိုကေသွားသေး .. ဟေဟေ့ ….
အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ် ကိုလူကလေး ခညာ …
စာ အရေးအသား ကောင်းလှပါကြောင်း ….
စာဖတ်ပျင်းတဲ့ ကျုပ်တောင် အစအဆုံး ဖတ်မိသွားပါကြောင်း …
သိနေတယ်လေ.. ဒီလို သငယ်နှပ်စား ဇာတ်သိမ်းတွေကို သိနေတယ်လေ.. အံစာ အတုံးကြီး ရဲ့..
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ လူကြီးက သူကလည်းမှားသေး သူကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ နွေးနဲ့တောင် အဆင်ပြေသွားသေး မိဗုံသာဆို ဓားသွားက သူ့ဘက်က ဓားရိုးက ကိုယ့်ဘက်ကဘဲ
စိတ်ထိန်း ဗုံဗုံရဲ့.. စိတ်ထိန်း..
တကယ် ဓားနဲ့ထိုးလိုက်ရင် ဟိုလူကြီးနဲ့ မရတော့ဘဲ နေလိမ့်မယ်.. ဟဲဟဲ..
သူက လူရိုးလေးပါကွယ်… နည်းနည်းလေးပဲ.. ဟိုဟာ.. ဟိုဟာ..
ပို့ စ်ဖတ်ပြီး ၊ ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ 
ဖေ့ဘုတ်က ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာဆိုလေး ရေးပြချင်ပါတယ်
ယောက်ျားလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျခင် ရည်းစားများတာ ပွဲမဝင်ခင် အပြင်မှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတာတဲ့
မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျခင် ရည်းစားများတာကတော့ စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်သလို ဖြစ်တာတဲ့
အံမယ် .. ပေ ပေ က .. ဖေ့ဘုတ်က အဆိုလေး .. ကြိုက်နေတယ်ထင်ပ…
ပေပေ့ကို ခင်ရို့နောက်တာ.. ဟီး .. ချိတ်ချိုးနဲ့..
နွေး သာကျုပ်သမီးဆိုရင် …ဟင်းးး ဓားအကြီးကြီးပေးလိုက်မှာ
ကိုင်း .. ဦးဆာမိ ကတော့ မပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ဝင်ပြီး ခံစားသွားပြီ ..
အွန်.. တူဂ လူပို မစစ်တော့ဝူးပေါ့…
ဇာတ်လမ်းလေးက အရမ်းကောင်းပါတယ် လူကလေးရေ…
နောက်လည်း များများရေးပါဦးနော်… မှားဖူးတဲ့တစ်ခါကို ခွင့်လွှတ်တဲ့နွေး… ကိုယ့်အမှားကိုယ်သိပြီး ယုံကြည်မှုထပ်ပျောက်မှာစိုးလို့ ထပ်မမှားအောင် ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကိုလင်း… အားကျမိပါတယ်လို့..
မှတ်ထားနော်.. လုံမလေး.. .
လူပို ဆိုတာ ချိကိုမချိတာ .. .. ချိဘူး.. ဂယ်ချိဘူး..
ဦးမာဃသာဆိုရင် အဲဒီနားမှာတင် ပွဲပြတ်တယ်
အဲဒီအချိန်သာ ဘေးမှာရှိနေရင် ဝရဇိန်နဲ့တောင် ကူပစ်ပေးမှာ
အခုတော့ တရားဝင် သတိပေးလိုက်မယ်နော်
နောက်တစ်ခါဆို ဝရဇိန်ပဲ သတိထား
အလို . . . . ကြမ်းတမ်းလှချည်လား ဗျ. . . ဦးမာဃကြီးရဲ့ ကြမ်းတမ်းလှချည်လား. . . . (ဇာတ်မင်းသားလေးဖိုးချစ်အသံနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်)
အဲလိုမလုပ်ရဘူးလေ. . . စိတ်ကလေးလျှော့ပါဦး
ဟိုလူလည်း လိမ္မာသွားပီပဲလို့ . . . ဟုတ်ဖူးလား ဗျာ. .